Fitefa: « Nahavita be ny Praiminisitra Ntsay Christian » | NewsMada
Fitefa: « Nahavita be ny Praiminisitra Ntsay Christian »
Afaka mirehareha tanteraka. Nankasitraka ireo raiamandreny avy any amin’ny faritanin’Antsiranana, nandray anjara mavitrika tamin’ny famahana ny krizy nisesy teto amin’ny firenena, ny eo anivon’ny Fikambanan’ny teraky ny faritanin’Antsiranana. “Soritanay manokana ny Praiminisitra fony Tetezamita, i Beriziky Omer, nikarakara ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Teo koa ny Praiminisitra Ntsay Christian, am-perinasa amin’izao fotoana izao. Nanomana sy nikarakara iny fifidianana iny tamin’ny fomba mendrika sy araka ny fenitra takina amin’izany”, hoy ny filohan’ny Fitefa, i Bekasy Johnfince, omaly tetsy Antaninarenina. Nialoha izany, niarahaba ny filoha Rajoelina, voafidy ho filoham-pirenena tamim-pomba demokratika, izy ireo. Notsiahivina tamin’izany fa anisan’ny nahazoany vato ambony, 81% mahery, ny tany Diana sy tany Sava. “Mankahery azy amin’ny adidy sy andraikitra hosahaniny… Vonona hiara-kiasa aminy izahay hanatanteraka ny tetikasa efa novolavolainy… Manantena izahay fa hijery akaiky ny faritanin’Antsiranana ny filoha vaovao”, hoy ihany izy.
Ampandeferina ny hambompo politika
Anisan’ny angatahin’ny Fitefa ny fanamboarana ny lalana Ambilobe-Vohemar sy ny ao Ambanja-Antsiranana, efa tena samba tokoa amin’izao fotoana izao. Manampy izany ny fanorenana tanàna vaovao, efa andrasan’ny ny any an-toerana satria hitondra fampandrosoana ho an’ny any Diana sy Sava ary hiteraka asa ho an’ny tanora.
Niantso ny rehetra koa ny Fitefa, indrindra ny zanak’iny faritany iny, hanamafy ny firaisankina sy hiara-kibanjina ny fampandrosoana. “Ampandeferina ny hambompo politika sy ny fizarazarana. Hanambatra hery isika hampandrosoana ny firenena sy hiadiana amin’ny fahantrana”, hoy ihany ny Fitefa.
Tazana tao avokoa ireo mpanao politika avy amin’ny firehana HVM, ny K25 ary koa ny miandany amin’ny antoko naorinan’ny filoha Rajoelina.